एकैदिनमा ३४०० ले घट्यो सुनको मुल्य
शनिवार, मंसिर २०, २०७७ ०२:०५:२९ युनिकोड पुरानो वेबसाइट
मंगलबार, कार्तिक २५, २०७७ बागेश्वरी पोस्ट
नेपालगन्ज । पछिल्लो समय उच्च मात्रामा निरन्तर बढ्दै गएको सुनको मुल्यमा आज भने भारी गिरावट देखिएको छ । गत शुक्रबार १००० र त्यसपछि निरन्तर ५०० रुपैयाँको दरले बढको सुनको मुल्य भने आज तोालामा ३४०० रुपैयााले घटेको छ ।
हिजो सुनको मुल्य प्रतितोला रु. ९८ हजार २०० रहेको थियो, आज त्यो घटेर ९४ हजार ८०० रुपैयाँमा कायम भएको छ । यस्तै, तेजावी सुनको मुल्य ९४ हजार ३०० रुपैयाँ रहेको छ ।
आज चाँदीको मुल्य पनि ह्वात्तै घटेको छ । हिजो चाँदीको मुल्य १२८५ रुपैयाँ थियो । आज त्यो ७० रुपैयाँले घटेर १२१५ रुपैयाँमा झरेको छ ।
बिशेषगरि कोभिड १९ को भ्याक्सीन आउन लागेको भन्ने हल्लाले र अमेरिकको नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपति जो वाइडेनले कोभिड १९ विरुद्ध लड्ने रणनीति बनाएको हल्लाले सुनको मुल्य घटेको बताइएको छ ।
कोभिडले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित हुदाँ शेयर बजार घटेको थियो । त्यसपछि शेयर लगानीकर्ताहरुको सुन तिर आर्कषित हुदाँ यसको मुल्य बढेको थियो । तर, अहिले कोभिडको भ्याक्सीन आउन लागेको र वाइडेडले पनि कार्यभार नसम्हाल्दै कोभिड विरुद्धको रणनीति बनाएको हल्ला आएपछि विश्व शेयर बजार बढ्न थालेको छ । त्यसपछि सुनको मुल्य घट्न थालेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पुर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कार्तिक २५, २०७७, ०७:४३:००
नेपालगन्जको कमल इन्टरप्राइजेजमा आगलागी,करोड बढीको नोक्सान
"एउटा हातमा राजनीति र अर्काे हातमा उद्यम रोजगारीको झण्डा बोकौँ "
नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालय सबैभन्दा बढी भ्रष्ट
शिक्षा क्षेत्रका हस्ती ओब बहादुर डाँगीको कोरोनाबाट मृत्यु शनिवार, मंसिर २०, २०७७
हुम्ला जिप दुर्घटनामा ४ जनाको मृत्यु,७ घाइते
कोरोना संक्रमणबाट बर्दियाका पुरुषको भेरी अस्पतालमा मृत्यु
कस्ती होलिन् उनी अप्सरा (राराको हुटु) अहिले ?
घोराही नगर प्रहरी प्रमुख प्रहरी हिरासतमा
गाँजालाई लागूऔषधको सूचीबाट हटाउन नेपालले गर्यो मतदान
बाँकेमा उपचाररत दाङका २६ बर्षीय युवकको कोरोनाबाट मृत्यु
बाँकेमा गएराति थप दुई जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
नेपालगन्जमा दुई सय बढी कार्यकर्ता राप्रपामा प्रबेश